Akụkọ - Gini bu ngọngọ?
N'October 31, 2008, NJ nke Satoshi Nakamoto bịanyere aka doziri nsogbu a site na akwụkwọ peeji 9 maka otu esi akwụ m ụgwọ na netwọkụ na-enweghị aha na nke ọma.
Anyị maara ugbu a na nwoke ahụ dị omimi a maara dị ka Satoshi Nakamoto na ibe itoolu ahụ sitere na ikuku dị nro nke 100 ijeri RMB na bitcoin na teknụzụ nke na-enye ya ike, ngọngọ.
Enweghị ndị ọzọ tụkwasịrị obi, nsogbu kachasị bụ na ọ dịghị onye n'ime anyị nwere ike ịtụkwasị ibe anyị obi, yabụ na ụwa blockcheni, a ga-agbasa ozi ka onye ọ bụla wee mara akụkọ ihe mere eme nke ọ bụla dollar ọ bụla na onye ọ bụla nọ netwọk. Ndị mmadụ ga-achọpụta na nke a bụ n'ezie ihe m kwuru na mbinye aka na kọmputa, wee tinye nnyefe ahụ na ndekọ. Akwụkwọ ndekọ a bụ ngọngọ. Ijikọta blọk ọnụ bụ ngọngọ. Ọ na-edekọ azụmahịa niile nke Bitcoin site na mmalite ya ruo taa, ma ugbu a, enwere ihe dị ka mgbochi 600,000, na puku abụọ ma ọ bụ puku atọ azụmahịa edere na ngọngọ ọ bụla, na akaụntụ ọ bụla, gụnyere nke gị na nke m, na-echeta kpọmkwem ego ole o nwere, ebe o si, ebe ejiri ya, ya na uzo ma mepere.
Na netwọkụ blockcheni, onye ọ bụla na-ejide otu akwụkwọ ndekọ aha ya na nke ezigbo oge. N’ụzọ na-atụghị anya ya, ntụkwasị obi nke akwụkwọ ndekọ bụ isi nkuku nke ego dijitalụ, ma ọ bụrụ na akwụkwọ ndekọ ahụ adịghị n’usoro, ọ nweghị ego ga-arụ ọrụ nke ọma.
Mana nke a na-ewelite ajụjụ abụọ: onye na-edobe akwụkwọ maka mmadụ niile? Kedụ ka ị si achọpụta na ịgaghị ụgha n’akwụkwọ ndị ahụ?
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike idebe akwụkwọ ndekọ, azụmahịa na usoro nke azụmahịa ndị dị na ngọngọ ọ bụla nwere ike ịdị iche, ma ọ bụrụ na e nwere ụma ụgha edetu, ọ ga-adị njọ karịa. Ọ gaghị ekwe omume ịnweta akwụkwọ ndekọ nke onye ọ bụla na-anabata.
Yabụ na onye na-edobe akwụkwọ ahụ ga-eme ka onye ọ bụla nabata ya ka akwụkwọ onye ọ bụla wee yie. Nke a makwaara dị ka usoro nkwenye.
Taa enwere ụdị nkwekọrịta dị iche iche dị iche iche maka mgbochi dị iche iche, yana Satoshi azịza ya bụ ime nsogbu ahụ. Onye ọ bụla rụpụtara azịza ya nwere ikike idebe akwụkwọ ndị ahụ. A na-akpọ usoro a PoW: Akaebe nke Ọrụ, Ihe Akaebe nke Ebu Ọrụ.
Ọdịdị nke akaebe nke ịrụ ọrụ zuru oke, yana ka ị nwere ike ịchọta ikike nke ngwaọrụ gị, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta azịza ya.
Iji mee nke a, hash encryption ejiri.
Were SHA256 algorithm dịka ọmụmaatụ, ụdị eriri ọ bụla ezoro ezo na ya na-eweta eriri pụrụ iche nke ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ 256-bit. Ọ bụrụ na gbanwere ntinye izizi n'ụzọ ọ bụla, ọnụọgụ hash ezoro ezo ga-adị iche.
Were SHA256 algorithm dịka ọmụmaatụ, ụdị eriri ọ bụla ezoro ezo na ya na-eweta eriri pụrụ iche nke ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ 256-bit. Ọ bụrụ na agbanwere ntinye izizi n'ụzọ ọ bụla, nọmba hash ezoro ezo ga-adị iche
Mgbe anyị meghere ngọngọ, anyị nwere ike ịhụ ọnụọgụ azụmahịa edere na ngọngọ ahụ, nkọwa azụmahịa, isi isiokwu na ozi ndị ọzọ.
Ihe nkedo ederede bu akara nke ngọngọ nwere ihe omuma dika timestamp, Merk osisi mgbọrọgwụ hash, onu ogugu na onu ogugu nke ogugu mbu, ma na-eme ihe nke SHA256 nke ozo na isi ihe nkpuchi a gha enye anyi ahihia nke ngba a.
Iji soro, ị ga-agbakọ ozi dị iche iche na ngọngọ ahụ, wee gbanwee nọmba a na-enweghị isi na nkụnye eji isi mee ka enwere ike ị nweta uru ntinye iji nweta uru hash ebe akara mbụ n bụ 0 mgbe ịkọchara ọnụ. .
Enwere uzo abuo obula maka uzo obula: 1 na 0, ya mere ihe puru inweta ihe iga nke oma maka ngbanwe obula na onu ogugu bu otu nth nke 2. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n bụ 1, ya bụ, ọ bụrụhaala na nọmba mbụ bụ 0, mgbe ahụ ihe puru inweta ihe ịga nke ọma bụ 1 n'ime 2.
Ka ike kọmpụta enwere na netwọkụ ahụ, ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ ka a ga-agụta, ma sie ike ịrụ ọrụ ahụ.
Taa, n na netwọk Bitcoin dị ihe dịka 76, nke bụ ọnụego na-aga nke ọma nke 1 na akụkụ 76 kwa 2, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 n'ime ijeri 755.
Jiri kaadi eserese $ 8,000 RTX 2080Ti, nke ahụ bụ ihe dịka afọ 1407 iji gụọ.
Ọ dịghị mfe nnweta mgbakọ na mwepụ nke ọma, mana ozugbo i mere, onye ọ bụla nwere ike nyochaa n’otu ntabi anya na ị nwetara ya. Ọ bụrụ n’ezie na ọ dị mma, onye ọ bụla ga-ejikọ ihe mgbochi ahụ na akwụkwọ ndekọ ma bido ịkwakọba na mgbochi ọzọ.
Wayzọ a, onye ọ bụla na netwọk nwere otu, ezigbo oge emelitere ledger.
Na ime ka onye obula kpalie ime akwukwo, uzo mbu iji mechie ngwugwu a gha enweta ugwo site na sistemu, nke bu bitcoins 12.5, ma obu ihe dika 600,000 RMB. A makwa usoro a dika igwuputa ihe.
N'aka nke ọzọ, iji gbochie ịdaba na ndagide ahụ, mgbochi ọhụụ ọ bụla etinyere kwesịrị ịdekọ uru nke hash nke gara aga, nke a makwaara dị ka akara hash, na isiokwu isi. Dị pointer dị otú ahụ na-aga n'ihu ga-emecha tụọ aka na ntọala izizi mbụ, na-ejikọchi ihe niile ahụ.
Ọ bụrụ n ’ịgbanwe mkpụrụedemede ọ bụla na ngọngọ ọ bụla, ị gbanwere uru nke uru nke ngọngọ ahụ, na-ewepụ pointer hash pointer na-esote ngọngọ.
Yabụ ị ga-agbanwe akara ngosi hash nke ngọngọ na-esote, mana nke ahụ na-emetụta uru nke hash nke ngọngọ ahụ, yabụ ị ga-agụgharị ọnụọgụ ọnụọgụ ahụ, ma ị gụchaa ngụkọta ahụ, ị ​​ga-agbanwezi ngọngọ ọzọ nke ngọngọ ahụ ruo mgbe ị gbanwere ngọngọ niile mgbe ngọngọ ahụ, nke siri ike.
Nke a na - eme ka ọ ghara ikwe omume onye na - ede akwụkwọ ego idebanye aha akwụkwọ adịgboroja ọ bụrụgodi na ọ chọrọ. N'ihi mbinye aka elektrọnik, onye na - ede akwụkwọ enweghị ike ịgha ụgha site na onye ọzọ nye onwe ya, yana n'ihi akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ ahụ, ọ nweghị ike ịgbanwe ego site na obere ikuku.
Mana nke a na-ewelite ajụjụ ọhụrụ: ọ bụrụ na mmadụ abụọ mezue mgbawa n'otu oge ma wepụta ngọngọ ọhụrụ, onye ka ha kwesịrị ige ntị?
Azịza ya bụ onye ọ bụla toro ogologo iji gee ntị, ugbu a onye ọ bụla nwere ike iburu ngwongwo abụọ ahụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ na nwoke nke mbụ gbakọọ ngụkọta oge na-esote họrọ ịbanye na B, mgbe ahụ eriri B ga-adị ogologo karịa ma onye ọ bụla ga - enwe ike ijikọ B.
N'ime mkpọ isii nke ngwugwu, a na-ebutekarị onye mmeri, a na-ewepụkwa azụmaahịa a gbahapụrụ agbahapụ ma weghachite ya n'ime ọdọ mmiri ịzụ ahịa ka ajuju.
Mana ebe ọ bụ onye ọ bụla toro ogologo oge na-ege onye ọ bụla toro ogologo, ma ọ bụrụhaala na ị nwere ike ịgụta ọnụ karịa onye ọ bụla ọzọ, yana ike ọgụgụ gị karịrị 51%, ị nwere ike ịchọpụta agbụ kachasị ogologo site na onwe gị, wee chịkwaa ndekọ ahụ. .
Ya mere, ka ukwuu nke ike ngụkọta oge nke ndị na-egwuputa ihe na ụwa Bitcoin, ọnụ ọgụgụ efu nke onye ọ bụla ga-agụta, na-achọpụta na ọ dịghị onye nwere ike ijikwa ledger ahụ.
Mana ngọngọ ndị ọzọ nwere mmadụ ole na ole anaghị eme nke ọma, dịka mwakpo 51% na ego dijitalụ akpọ Bitcoin Gold na Mee 15, 2018.
Ndị mwakpo ahụ bu ụzọ nyefee $ 10 nde nke bitgold nke aka ha na mgbanwe, edekọkwara mbufe a na mgbochi A. Ndị mwakpo ahụ nwekwara ike ibufe $ 10 nde nke bitgold nke ha na mgbanwe. N'otu oge ahụ, onye na-awakpo ya na nzuzo kwadebere ngọngọ B ebe ntụgharị ahụ emeghị ma gbakọọ ihe mgbochi ọhụrụ mgbe ngọngọ B. Onye na-awakpo ahụ na nzuzo kwadebekwara B ebe ebe mbufe ahụ na-emeghị.
Ozugbo mbufe na agbụ A gosipụtara, onye na-awakpo ya nwere ike ịdọrọ ntakịrị ọla edo na mgbanwe ahụ. Ma ebe ọ bụ na ike Mgbakọ onye na-awakpo ahụ dị 51% karịa netwọkụ niile, agbụ B ga-emecha ogologo karịa sistemu A, na ịhapụ ịhapụ agbụ B ogologo na netwọkụ niile, a ga-edegharị akụkọ ihe mere eme, agbụ B ga-anọchi ya A ga - ewepụ agbụ dị ka ezigbo agbụ, na ịnyefe na mgbanwe na Block A, na - enweta onye na - awakpo 10 nde n'efu.
Taa, ụzọ kachasị mfe maka onye ọ bụla na-enweghị ike ị nwere ike ịnweta ego dijitalụ bụ ịzụta ya na mgbanwe ma wepụ ya na adreesị obere akpa gị.
Adreesị a sitere na igodo nzuzo gị, nke ezoro ezo, na igodo ọha, nke ezoro ezo, na-enweta adreesị.
N'ebe a na-amaghi ihe di ka ngọngọ ahụ, naanị igodo nzuzo nwere ike igosipụta na ị bụ ya, ma ọ bụrụhaala na mbufe ahụ na mbinye aka elektrọnik nke igodo nzuzo gị mebere, onye ọ bụla nwere ike ikwenye na nnyefe ahụ dị irè. Ya mere ọ bụrụ na mkpịsị ugodi nke onwe gị emebi, onye ọ bụla nwere ike ịme ka ọ bụrụ gị ma nyefee ego ahụ.
mkpuchi crypto asic, btc akpa, antminer akpa, antbox akpa, eji akụrụngwa akụrụngwa crypto, obere akpa,